Kuratidza zvinyorwa neelebheri Frydstejn
Matongo eFrýdštejn castle 360 ​​panorama
Frýdštejn inzvimbo yakasarudzika inowanikwa mumusha weFrýdštejn padyo neMalá Skály mudunhu reJablonec nad Nisou.
Iyo yakanyanya kutonga chivakwa chikuru chivakwa chivakwa, chakavakirwa pamusoro pebwe rejecha, kubva kwaunogona kuona rwizi rwese. Iyo shongwe yakakwirira makubhiti gumi nemashanu, ine avhareji yemamita 15 uye madziro ane ukobvu hwemamita maviri.
Pojizeří aibva ku13. Imba yezana remakore yeMarkvatics. 1363 inozivikanwa sevamani venharaunda yakapoteredza Hodkovice, madzishe e Dražice uye 1376 Jan II. kubva kuBibrštejn, mhuri yeBrrrjjjn iri kugara muFrýdlant zvichida yakamira paimba.
Kutaura kwokutanga kwaFrýdštejn kunobva mugore ra1385, zvinyorwa zvegore iroro zvinoreva Bohunka Puklíce kubva kuFrýdštejn. Pakazosvika gore re1400 imba iyi yaiva yeimba yeKamenci kubva kuStřížovice uye Čakovice.
Pakutanga kwezana ramakore rechi 15 Bohuš weKováně akava muridzi wenzvimbo yacho. Muna 1432 chivakwa chakakomberedzwa nemaHussites anotungamirwa naOtto weLoza naJan Čapek weSan. Katurike Bohuš weKovaně akatanga kuita chibvumirano nevaHussites, chakazoshandurwa uye muna 1448 akabatsira Jiří wePoděbrady mukukunda Prague. Mushure mekufa kwaBohuš muna 1460 iye…